မြေအောက်ရထား JWAT302, တရုတ်အရေးပေါ်တယ်လီဖုန်းလမ်းဘေးတိုးမြှင့်တယ်လီဖုန်းအမြန်ယာဉ်စက်မှုဇုန်မြေအောက်ရထား JWAT302 ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ - Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co. , LTD
မြေအောက် JWAT302 အတွက်အရေးပေါ်တယ်လီဖုန်းလမ်းဘေးတိုးချဲ့တယ်လီဖုန်း
Made of metal and sturdy.The spring door is automatically closed and is not easily opened by outside interference.The telephone is rugged and durable. Special sealing design can ensure complete ရေစိုခံ grade up to IP66. weatherproof , dustproof and moisture-resistant. The weatherproof telephone widely used in tunnel and outdoor.
5.Waterproof zinc သတ္တုစပ် Keypad ။
ချဲ့ထွင် Output ပါဝါ 10 ～ 25W
ambient အပူချိန် -40 ～ + 60 ℃
5000 အစုံ / လ
ညှိနှိုင်းမှုအတွက် T / T, Paypal, Alibaba ကုန်သွယ်ရေးအာမခံ၊ L / C သို့မဟုတ်အခြားသူများ။
စံပြနမူနာများကို ၃ ရက်ခန့်ပို့ရန်ပြင်ဆင်ထားလိမ့်မည်။
မြေအောက်ပိုက်ပြခန်းပြည်သူ့ပလပ်စတစ်ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သောတယ်လီဖုန်း - JWAT304